Fannaanka Nuur-Daalacay Oo Si Weyn Uga Damqaday Aflagaaddo Siyaasiyiintu Isu Jeediyeen. | Salaan Media
Fannaanka Nuur-Daalacay Oo Si Weyn Uga Damqaday Aflagaaddo Siyaasiyiintu Isu Jeediyeen.
Hargeysa(SM):- Fannaanka caanka ah ee Qaranka Somaliland Nuur Jaamac Aadan (Nuur- Daalacay), ayaa nasiib-darro ku habsatay Somaliland ku tilmaamay Caytanka Siyaasiyiinta Somaliland isu marinayaan Saxaafadda.
Fannaan Nuur-Daalacay, ayaa sidoo kale talo arrintaas lagaga bixi karo u gudbiyay dhinacyada Muxaafidka iyo Mucaaridka. Sidaana wuxuu ku sheegay mar uu Khadka Telefanka kula soo xidhiidhay Shabakadda Wararka ee Somalilandtoday.com. Fannaanka, ayaa hadalkiisa laga dareemaayay siday u dhibtay caytankaas Siyaasiyiintu, waxaanu yidhi; “Waxaa caawa iga hadliyay oo aan xejisan waayay, arrin aan odhan karo waa nasiib-darro innagu dhacday oo u baahan in aanay halkaas innagu dhaafin, arrintaasi waa cayntanka maalmihii ugu danbeeyay xadhkaha goostay.”
“Dalkeena Somaliland waa waddan dimuquraaadi ah, waxaynu qaadanay nidaamka tartanka xorta ah iyo doorashada, waxaynu leenahay muxaafid iyo mucaarid, arrintaas adduunka inagu ammaanay, waxaynu qabsan waxyaabo badan oo aanay cidi inaga caawin. Innagoo waxaas oo dhan qabsanay inaynu sidan u wada hadalno runtii ceeb weyn ayay inagu tahay.” Sidaa ayuu yidhi Fannaanka Nuur-Daalacay.
Waxaanu isagoo hadalkiisa sii wata intaa ku daray oo uu yidhi; “Haddaad moodaysaan in caydu Hargeysa ku eegtahay Adduunka oo dhan ayaa laga ogyahay, waana loo turjumayaa caalamka cayntankan iyo xaaladahan adag ee Mindi Mindi ku taagta ah, sidoo kale cadawga Somaliland ayaa daawanaaya. Annagu dadkii idin dhagaysanaayay ayaannu nahay, aad bay runtii noo dhibtay cayntankaasi oo ku xun Diinteenna suubban iyo dhaqankeenna soo jireenka ah-ba, Mucaaridku waa inuu soo bandhigaa wixii dhiman ee dawladdu dhaaftay, Muxaafidkuna waa inuu ka sii kordhiyaa wixii hadhay.”
“Laakiin, in lays nasab-caayo, in Sodohihii laysla jiidho, in reerihii la xamasadeeyo waxba kuma hagaagayaan. Saxaafadda baahinaysana waan leeyahay, walalayaal illahaybaan idinku dhaarshee wixii dalkeena duminaaya ka daaya baahinta aad baahinaysaan, kii dabad joogayna wuu ka naxayaa kii cadawga ku ahaa Somalilandna wuu ku farxayaa.” ayuu yidhi Fannaanka Nuur-Daalacay.
Fannaanka Nuur Jaamac Aadan (Nuur-Daalacay), ayaa sidoo kale soo jeediyay, talo arrintaas xal loogu heli karo waxaanu yidhi; “Waxaan soo jeedin lahaa haddii Bulshadu illa qaadato oo aan jeclaan lahaa in la xoojiyo, oo la sameeyo Guddi Madax-bannaan oo ehlu-caqli iyo Culimo ah, kuwaasoo anshax mariya Mucaarid iyo Muxaafid ruxii caytama ee dhaafa xayndaabka dublumaasiyadeed. Guddidaasi runtii waxay u noqon kartaa xal arrintan caytanka xadka dhaafay.”
“Waar dad walaalo ah ayaynu nahay, Dumarkeenni ayaynu suuqa keenaynaa innagoo siyaasiyiin ah, innagoo ah kuwii dadku tuhmaayeen, waynu is qabiil caayaynaa, sidee ayaynu ku sii jiri karnaa. Markaa, aan ku celiyo Saxaafadda Somaliland Illaahay haka baqaan oo dalkan haw-tudhaan, waar Wallaahi Nin kasta wuu ka dumayaa dalkani haddaanu ilaalin aynu ilaashanno.” Sidaa ayuu yidhi oo uu hadalkiisa ku soo gebo-gabeeyey Fannaanka Nuur Jaamac Aadan (Nuur-Daalacay).